“Inaan ka mid noqono afarta ugu sareysa kuma filna Manchester United” – Marcus Rashford – Gool FM
(Manchester) 21 Nof 2019. Weeraryahanka kooxda Manchester United ee Marcus Rashford ayaa shaaca ka qaaday inay ka mid noqdaan afarta ugu sareysa horyaalka Premier League inaysan ku filneyn, isagoo xusay inuu doonayo inuu koobab ku guuleysto xilli ciyaareedkan.
Manchester United ayaa xilli ciyaareedkan ka maqan tartanka Champions League, kaddib markii ay kaga dhameysteen kaalinta lixaad ee miiska kala sareynta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Haatan Manchester United ayaa ku jirta kaalinta 7-aad miiska kala sareynta horyaalka Premier League, waxayna 9 dhibcood u jirtaa booska afaraad oo ay haatan fadhiso Manchester City.
In kasta oo ay tahay howl adag u dagaalamida ka mid noqoshada afarta ugu sareysa horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, haddana Marcus Rashford ayaa aaminsan inaysan taasi ku filneyn, wuxuuna doonayaa in kooxdiisa uu kula guuleysto koobab.
Sida laga soo xigtay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” Marcus Rashford ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u maleynayaa inay ku dhowdahay 18 bilood tan iyo koobkeenii ugu dambeeyay, waqti badan ayaa ka soo wareegatay”.
“Haddii aan ku dhameysano xilli ciyaareedka mid ka mid ah afarta sare, iyadoo aanan ku guuleysanin wax koob ah, kuma farxi doono”.
“Waa inaan dulqaad yeelano inta aan sii wadno shaqada adag, isla markaana aan aamino waxaan qabanayno, waan ogahay inaan fiicnaan doono, sababtoo ah waxaan bixinaa wax walba oo aan haysano”.
Waxaa xusid mudan in Manchester United ay ilaa iyo haatan u tartami karto saddex koob xilli ciyaareedkan, iyagoo u soo baxay wareega siddeeda ee koobka Carabao Cup, marka lagu daro tartamada kale ee FA Cup iyo Europe League.